Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! कोरोनाको ग्राफ दैनिक उकालो : विज्ञ भन्छन्-'कति फैलाउने भन्‍ने नागरिककै हातमा'
अन्जु डिम्दोङ तामाङ बिहीबार, साउन १४, २०७८
काठमाडौं । साउन महिनाको केही दिनको कोरोना संक्रमितको फरक संख्यालाई नियालौं, साउन ४ गते १६ सय ४२ जना संक्रमित थिए । त्यसको ८ दिनपछि १२ गते संक्रमितको संख्या ३ हजार ८ सय ९९ पुग्यो । यो दुवै तथ्यांक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । यो ८ दिनको फरकमा २ हजार २ सय ५७ जना कोरोना संक्रमित थपिए ।
सरसर्ती हेर्दा साउन लागेदेखि कोरोना संक्रमित संख्याको ग्राफ उकालो लागेको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ भेरियन्ट थपिएसँगै तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने बताउँदै आएको छ । मन्त्रालयको यो भनाइले बल्ल सामान्य काममा फर्कन लागेका नागरिक फेरि पनि बन्दाबन्दी (निषेधाज्ञा) हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । कोरोना बढेकै हो त ? भनेर हामीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुनलाई सोध्यौं । उहाँको जवाफ थियो 'सरकारले बिस्तारै एक पछि अर्को क्षेत्र खुल्ला गर्नु र नागरिक आफै पनि बाध्यताले आफ्नो काममा निस्कन थालेसँगै स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड नअपनाउँदा संक्रमितको संख्या बढेको हो' ।
'ब्यापार व्यवसाय खोल्नु हुँदैन भन्ने होईन तर स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिएर आफ्नो काममा लाग्नु राम्रो हो' डाक्टर पुन भन्नुहुन्छ । नागरिक आफैंले पनि आफ्नो काम उदेश्यको लागि कोरोना परिक्षण गर्ने र पीसीआर ल्याब सबै ठाउँमा सजिलैसँग पाउँने भएको हुँदा पनि संख्यामा बृद्धि भएको होकि भन्ने डा. पुनको अनुमान छ ।
बच्ने र बचाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ
अब कोरोनाबाट बच्नको लागि बच्ने र बचाउँने दुई कुरामा ध्यान दिनुपर्ने डा. पुन बताउनुहुन्छ। कुराकानीको क्रममा उहाँ भन्नुहुन्छ ‘बच्ने भनेको नागरिक आफैंले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नु हो भने बचाउँने भनेको सरकारले नागरिकलाई छिटो भन्दा छिटो कोरोनाको खोप लगाउँनु हो । तर खोप केन्द्रमा नागरिकलाई सुरक्षित, भीडभाड नगरी खोप लगाउने विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । यि दुई कुरालाई ध्यान दिने हो भने कोरोना महामारीले भयावह रुप लिन सक्दैन’ । पहिलो लहर भन्दा दोस्रो लहर नेपालको लागि निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो । दोस्रो लहरलाई सम्झिने हो भने २४ घण्टामा झण्डै २ सय ५० नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए । अस्पतालमा बेड, अक्सिजन अभावका कारण धेरै नागरिकको अकालमै ज्यान गुमाउनु प¥यो । अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनको संख्या १० हजार नजिक रहेको छ ।
तेस्रो लहर त्यो भन्दा पनि भयावह हुन सक्छ या सामान्य, त्यो अनुमान गर्न सकिदैन । तर खोप कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको हुँदा समस्या कम हुन्छ की भन्ने अनुमान गरिएको छ । हालसम्म ३६ लाख नागरिकले पहिलो डोज खोप लगाएका छन् भने त्यसमध्ये ११ देखि १२ लाखले दोस्रो डोज पनि पुरा गरेका छन् । सहजै उपलब्ध भएको हुँदा नागरिकले सम्बन्धित खोपकेन्द्रमा गएर खोप लगाउने हो भने चरण–चरणमा कोरोना महामारी नआउने सरकारको बुझाई छ । संक्रमितको संख्या बढ्दै जानुमा नागरिकले जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई राम्रोसँग पालन नगर्नु मुख्य कारण देखिन्छ ।
समस्या बढ्न नदिन तयारी तिब्र
कोभिड– १९ केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख डा. जागेश्वर गौतमले पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बउनुभयो । एक सातादेखि कोराना संक्रमतिको संख्या बढेको डा. गौतम स्विकार्नुहुन्छ । संक्रमित संख्या बढ्नुमा नागरिकले स्वास्थ्यमापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना नगरेको उहाँको तर्क छ । कोरोना खोप छिटो भन्दा छिटो नागरिकलाई दिन सक्ने हो भने दोस्रो लहरजस्तो भयावह अवस्था भने नआउने देखिन्छ ।
नेपालमा आफैंले जानेर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नेको संख्या निकै कम हुँदा अब तेस्रो लहरलाई भयावह रुप नदिनको लागि सरकारी निकाय आफै कडा रुपमा उत्रिनुपर्ने डा. गौतमको भनाई छ ।
उपचारमा समस्या हुने छैन
तेस्रो लहर आएको खण्डमा नागरिकले दोस्रो लहरजसरी नै स्वास्थ्य समस्या भोग्नु पर्ने होलानी भन्ने प्रश्नमा डा. गौतमले तेस्रो लहर आएको खण्डमा उपचारमा कुनै पनि समस्या नहुने विश्वस्त पार्नुभयो । अहिले महामारी फैलिएको खण्डमा दोस्रो लहरमा बिरामी भएको जति नागरिकको संख्यालाई स्वास्थ्य सेवा दिन पूरा तयारीमा रहेको उहाँले थप्नुभयो । अस्पताल, बेड, अक्सिजन र जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेका छन् । दोस्रो लहर सारै पिडादायि भयो ,अस्पतालमा अक्सिजन छैन, बिरामीलाई सिलिण्डर लिएर आउ भन्नेसम्मको अवस्था आएको थियो, तर अहिले अक्सिजनको व्यवस्था भएको छ । २० देखि २२ वटा अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन कन्सनटेटर लगायत धेरै कुरामा सरकारी तयारी गरेको हुँदा भयावह रुप नहोला भन्ने लागेको छ’ । उहाँ थप्नुहुन्छ– लाखौंलाख नागरिक एकै दिनमा संक्रमित भएको खण्डमा भने फेरि नपुग्न सक्ने हुन्छ, त्यसको लागि पनि सरकार आन्तरिक तयारीमा लागिरहेको छ ।
निजी अस्पताल जानु नपरोस्
पहिलो भन्दा पनि दोस्रो लहरमा नागरिकले धेरै दुःख पाए । निजीमा निकै महङ्गो मूल्य तिरेर उपचार गर्न बाध्य भए । एकातिर आफन्तको निधन, अर्कोतिर अस्पतालको महङ्गो बीलले नागरिकलाई धेरै पीडा दिएको थियो । सरकार सकेसम्म कोरोना उपचारको लागि नागरिक सरकारी अस्पतालमै आओस भन्ने चाहान्छन् । अतिआवश्यक परेको खण्डमा मात्रै निजी अस्पताल, नत्र सरकारी अस्पतालमै नागरिकलाई उपचार गर्ने व्यवस्थासहित तयारी भईरहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसख्ंया मन्त्रालयको उपचार मापदण्ड अनुसार नीजि अस्पतालहरुले सेवा प्रदान नगर्दा कोरोनाको उपचारमा घरखेतनै जाने अथवा निधन भएको बिरामीको पैसा तिर्न नसक्दा शब बुझ्न गाह्रो भएको जस्ता समस्याहरु दोस्रो लहरमा भोगेका कारण सकेसम्म नीजि अस्पतालमा नागरिक जानुनपरोस भन्ने तबरका साथ सरकार लागिरहेको डा। गौतमले स्पष्ट पारे ।
हाल कोभिड– १९ केन्द्रीय अस्पताल, बीर अस्पताल र धेरै समस्या परेको खण्डमा ट्रमा सेन्टरगरी ११ सय बेड उपलब्ध गराउन सक्ने तयारी अवस्थामा सरकार रहेको छ । कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने सामान खरिदमा सबै अस्पतालहरुले प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । ‘कोरोना लाग्यो भने बीर अस्पताल आउनुस, निःशुल्क उपचार गर्नु्, घरखेत बचाउनु’ यो स्लोगन (नारा) सहित नागरिकलाई आव्हान गरेर सकेसम्म सरकारी अस्पतालमै नागरिकको उपचार गराउन सरकार लाग्ने डा. गौतमको भनाई छ । कोरोनालाई कति फैल्याउने भन्ने कुरा नागरिकै हातमा छ । त्यसैले मास्क, स्यानिटाईजरको नियमीत प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात सफा गर्ने, भीडभाडमा नजाने लगायत जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउने हो भने कोरोनाको तेस्रो लहर आए पनि अघिल्लो पटकको जस्तो भयावह अवस्था भने पक्कै हुने छैन ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १४, २०७८, १७:३२:००
शुक्रबार, असोज ८, २०७८ कोरोना अपडेट : १४ सय ८६ नयाँ संक्रमित थपिए, १५५० डिस्चार्ज, ९ जनाको मृत्यु
शुक्रबार, असोज ८, २०७८ नुवाकोट पञ्‍चकन्यामा असोज ९ देखि ११ गतेसम्म कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइने [सूचनासहित]
बिहीबार, असोज ७, २०७८ नेपालमा १ हजार २ सय ३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
बुधबार, असोज ६, २०७८ कोरोना अपडेट: १६३० संक्रमण मुक्त, १४७८ नयाँ संक्रमित थपिए
मंगलबार, असोज ५, २०७८ कोरोना अपडेट : १८३० निको, १३३० नयाँ संक्रमित थपिए, ५५ हजार धेरैले लगाए खोप
सोमबार, असोज ४, २०७८ कोरोना अपडेट : २९५७ डिस्चार्ज, १०९५ नयाँ संक्रमित थपिए, ८ जनाको मृत्यु